के प्रभास र अनुष्का अफेयरमा छन्? अफेयर बारे अनुष्का दिइन यस्तो जवाफ…
३ चैत २०७६, सोमवार, एजेन्सी– बाहुबली फिल्मका दुई स्टार अनुष्का शेट्टी र प्रभासको जोडीबारे अहिले पनि बलिउडमा चर्चा भइरहेको हुन्छ । उनीहरूका फ्यानले पनि यो जोडीको विषयमा बारम्बार सोधखोज गरिरहेका हुन्छन् । रिल लाइफमा जोडी बनेका यी दुई के रियल लाइफमा पनि अफेयरमा छन् त ? यसबारे यी दुवैले मुख खोलेका छैनन् ।प्रभास र अनुष्काले बारम्बार यस विषयमा आफूहरू नजिकको मिल्ने साथी मात्र भएको प्रस्ट पारिसकेका छन्।
तर अनुष्काले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, ‘म प्रभासलाई १५ वर्षदेखि चिन्छु, उनी मेरा अत्यन्त मिल्ने साथी हुन् । हाम्रो दोस्ती कस्तो छ भने म बिहान ३ बजे पनि उनलाई कल गर्न सक्छु । हामी दुवैको विवाह भएको छैन, त्यसैले पनि हामी मिल्ने साथी भएका हुन सक्छौँ । यदि हाम्रो बिचमा केही थियो भने अहिलेसम्म थाहा भइहाल्थ्यो।’ अनुष्काको एक निर्देशकसँग अफेयर चलेको भन्ने केही समयअघि आएको समाचारलाई पनि उनले अस्वीकार गरेकी छिन् । उनी बाहुबलीमा देवसेनाको भूमिकामा छिन् । यो पनीः जब आलियाले भनिन्- मलाई मेरा बुवा महेशजस्ता श्रीमान् चाहिएन ।
एजेन्सी– भारतीय सिने क्षेत्रकी एक चर्चित अभिनेत्री हुन् आलिया भट्ट । बेलाबखतमा उनी चर्चामा आइरहेकी हुन्छिन् । त्यसो त उनी बलिउडमा पाइला राखेपछि नै बारम्बार चर्चाको केन्द्रमा हुन्थिन । किनकि उनले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन्थिन् जुन सबैलाई अचम्म लाग्ने खालका हुन्थे । प्रायजसो महिलाहरू आफ्नो श्रीमान् आफ्नो बुबाजस्तो होस् भनी कामना गर्छन्। तर यही प्रश्नको सामना बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टले सामना गरेकी छन्। उनले केहीअघि आफूलाई बाबु महेश भट्टजस्तो पति नचाहिएको बताएकी थिइन् । यही कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै छाइरहेको छ । उनी अनुपम खेरको शोमा आफ्ना बुबा महेश भट्टसँगै शोमा पुगेकी थिइन् । उक्त शोमा आलियालाई, तपाईँ पनि आफ्नो बुबाजस्तो श्रीमान् पाउने कामना गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, ‘मेरो र बाबाको राम्रो सम्बन्ध छ, हामी एक दुईसँग अत्यन्त नजिक पनि छौँ । हामी त सबै कुरा सेयर गर्छौँ, हामी साथी पनि हौँ । तर, मलाई पति बाबुजस्तो चाहिँदैन । किनकि मलाई एउटै महेश भट्ट काफी छन्, दुई वटा चाहिँदैन ।’
केही अघिसम्म आलियाले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे खासै बोल्ने गरेकी थिइनन् । तर, अब उनी आफ्नो प्रेम सम्बन्ध बारे पनि खुलेर कुरा गर्ने भएकी छिन् । यहीबिच उनले रणवीर कपुरसँगको सम्बन्धबारे भनेकी छिन्, ‘जब म उनीसँग हुन्छु, अत्यन्त खुसी हुन्छु । शान्त र रिल्याक्स महसुस गर्छु ।’